Samsung Tool For Pattren Unlock & Factory Setting Phone ~ mgkhainghtoo
Samsung Tool For Pattren Unlock & Factory Setting Phone
21:41 မောင်ခိုင်ထူး No comments
ဆမ်ဆောင်းဖုန်းတွေ Pattern lock ကျနေရင်ဖြစ်ဖြစ်၊Factory Setting ပြင်ချင်တာဖြစ်ဖြစ်အသုံးဝင်မယ် Tool လေးပါ။
1. ဖုန်းကို USB ကြိုးနဲ့ ကွန်ပျုတာနဲ့ ချိတ်ဆက်ထားလိုက်ပါ။
2. ဒေါင်းလုပ်လုပ်ထားတဲ့ Samsolution.exe ကိုဖွင့်လိုက်ပါ။
3. Ports ဆိုတဲ့ မှန်ဘီလူးပုံလေးနဲ့ ကောင်လေးကိုနိပ်လိုက်ပါ။
4. ဖုန်းရဲ့ COM port ကို Drop down List ကနေရွေးလိုက်ပါ။
(if don't know, Find your Device's serial COM port from Device Manager = (Right click My Computer -> Manage -> Device Manager -> Ports (COM & LPT).
5. Read all info from Phone! ကိုကလစ်ပေးလိုက်ပါ။
6. Click Disable Pattern UNLOCK! ( Now Just Disabled Pattern Lock ! if you want to backup your Phone Data Do it Manually)
7. Click Factory Setting Phone